तपाईको राशी के; यी ४ राशी भएका पुरुषले पाउँछन् सुन्दर र गुणवती श्रीमती
नोभेम्बर 11, 2018 साइन्स इन्फोटेक	11 Comments पुरुष, राशी, श्रीमती
हरेक व्यक्तिका आ–आफ्नै चाहना हुन्छन् । त्यस्ता चाहनाहरु समय-समयमा प्रकट पनि हुन्छन् । प्राय: हरेक पुरुषको एउटा समान चाहना हुन्छ, सुन्दर र गुणवती श्रीमती पाउनु । तर यो त जरुरी छैन कि सबैको यो चाहना पूरा होस् । यसमा केही हदसम्म हाम्रो भाग्यले पनि प्रभाव पार्छ अथवा राशि अनुसार पनि पुरुषले सुन्दर महिला पाउने विषय शास्त्रमा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
१. मकर राशी
मकर राशी भएका व्यक्ति धेरै रोमान्टिक मानिन्छन् । आफ्नो पार्टनरलाई सरप्राइज दिन उनीहरुलाई विशेष ज्ञान हुन्छ । उनीहरु अचानक खुसी बनाउन पनि माहिर हुन्छन् । मकर राशी भएका व्यक्ति धेरै ‘क्यूट’ र रोमान्टिक व्यक्तित्वको हुन्छन् । जसकारण पनि केटीले यस्ता राशी भएका पुरुषलाई मन पराउँछन्।
२. तुला राशी
सुन्दर श्रीमती पाउनुलाई भाग्यसँग जोडिन्छ र त्यस आधारमा तुला राशि भएका व्यक्ति सबैभन्दा भाग्यमानी मानिन्छन् । तुला राशी भएका व्यक्ति धेरै इमोशनल र समझदार हुन्छन् । यस्ता राशी भएका व्यक्तिको प्रमुख विशेषता हो कि यिनीहरु आफ्नो पार्टनरसँग गहिरो सम्बन्ध स्थापित गर्न सफल हुन्छन् ।
३. कन्या राशी
कन्या राशी भएका पुरुष धेरै सुन्दर हुने विश्वास छ । यस्तो राशी भएका व्यक्ति कुरा गर्नमा पनि सिपालु हुन्छन् । कन्या राशी भएका व्यक्तिमा खास गरेर केटीलाई पट्याउने अनौठो कला पनि हुन्छ । जसकारण उनीहरु सुन्दर केटीलाई आफ्नो जीवनसाथी बनाउन सफल हुन्छन् ।
शास्त्रमा वर्णन गरिए अनुसार कर्कट राशी भएका व्यक्ति पनि भाग्यशाली मानिन्छन् । यो राशी भएका व्यक्ति धेरै दूरदर्शी हुन्छन् । यसको अतिरिक्त यो राशी भएका व्यक्ति भविश्यका लागि सजग पनि हुन्छन् । यस्तो राशी भएका व्यक्ति केटीको चाहना बुझ्न माहिर मानिन्छन् । कुनै महिलालाई के चाहिएको छ भन्ने कुरा कर्कट राशि भएका पुरुषले सजिलै बुझ्न सक्छन् । साथै केटीलाई कसरी आफूप्रति आकर्षित गर्ने भन्ने विषयमा पनि कर्कट राशी भएका पुरुषहरु धेरै सजक हुन्छन् । यो राशी भएका धेरै व्यक्ति प्रेम विवाह गर्छन् ।
आफ्नो भाग्य रेखा आफै हेर्नुहोस
तपाईको नेतृत्व क्षमता थाहा हुन्छ हातको औँलाबाट
← शिवजीलाई प्रसन्न गराउन भक्तहरूले जान्नुपर्ने उपायहरू
नेपालीको कथा आफ्नै वेथा →
सामाजिक बहस – दुई श्रीमतीलाई सहज ठान्ने समाज किन दुई श्रीमान राख्न दिंदैन ? भन्ने सामाजिक संजालमा आएको बहसमा तपाईको धारणा के छ ?
मार्च 13, 2018 मार्च 13, 2018 साइन्स इन्फोटेक 0
यी ३ राशी हुने बुहारीहरुले बनाउछन् घरलाई स्वर्ग समान
11 thoughts on “यी ४ राशी भएका पुरुषले पाउँछन् सुन्दर र गुणवती श्रीमती”
Pingback:तपाई बिहे गदै हुनुहुन्छ थाहा पाउनुस तपाईंकी हुनेवाली श्रीमतीको बारेमा यी ५ कुराहरु
Pingback:यस्ता छन् केटीहरुले आफूभन्दा बढी उमेरको केटासँग विवाह गर्ने कारणहरु
Pingback:ज्योतिषशास्त्र अनुसार यी ४ राशि भएका मनिसले कहिले पनि अरुलाई धोका दिँदैनन्
Pingback:कुन राशिका केटी प्रेममा चाँडो पर्छन्
Pingback:ज्योतिषशास्त्र अनुसार यी ४ राशि भएका मानिससँग हुन्छ संसारकै अद्भुत शक्ति
Pingback:तपाईको राशीवाट अक्षरबाट थाहा पाउनुहोस् तपाईको प्रेम र विवाहको सम्वन्धको बारेमा
Pingback:यस्तो छ थाहा पाउनुहोस् मेष राशिको शुभ, अशुभ, भाग्य तथा भविष्य
Pingback:जान्नुहोस् ! यस्ता छन् अहिलेको समयका श्रीमतीका प्रकारहरु
Pingback:जन्नुहोस् ! यस्ता छन् नारीलाई भुतुक्कै पार्ने पुरुषमा हुनुपर्ने ११ गुणहरु
Pingback:पुरुषलाई मन नपर्ने महिलाका केहि बानी व्यवहारहरु
Pingback:महिलाहरु पुरुषका यी ५ कुराबाट टाढा भाग्छन्, अहिले नै गर्नुहोस् परिवर्तन